'नेपाली फिल्म क्षेत्रमा तत्काल नयाँ लगानीकर्ता नआउने हो भने संकट लम्बिन्छ' - Arthatantra.com
काठमाडौं । कोरोना महामारीले नेपाली फिल्म उद्योग ठप्प भएको अवस्थामा भाडाकुटी नामक फिल्म बनाउने घोषणा गरेका निर्देशक किरण बिके अहिले अन्य फिल्म पनि बनाउने तयारीमा छन् ।
कोरोना महामारीका कारण सिनेमा घर बन्द भएको अवस्थामा उनले २०७७ कात्तिकमा आफ्नै निर्देशनमा फिल्म बनाउने घोषणा गरेका थिए, जुन कार्यकालाई फिल्म क्षेत्रले साहसी कदमको रुपमा लिएको छ । बिशेषगरि उनलाई नेपाली फिल्म क्षेत्रको उदाउँदो फिल्म मेकर तथा निर्देशकको रुपमा हेरिएको छ ।
पछिल्लो समय फिल्म बुझेर पढेर लेखेर आउनेहरुको जमात बढ्दो त छ नै, त्यो भिडमा पनि विक पृथक मानिन्छन् । फिल्ममा ब्याचलर्स पास गरेका विकले केहि सर्ट फिल्म बनाइसकेका छन् ।
उनले प्रसिद्ध भारतीय फिल्म लेखक रोबिन भाटसंग पनि फिल्म लेखनको तालिम लिएका छन । प्रस्तुत छ, उनै बिकसंग समसामायिक बिषयमा गरिएको कुराकानीको सारः
नेपालमा अहिले फिल्मी माहोल कस्तो छ ?
बास्तवमा अहिले फिल्मी माहोल तातेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीले फिल्मी क्षेत्र नमज्जाले प्रभावित भएको थियो । साथै, हलहरु पनि लामो समयसम्म बन्द भएका थिए । तर, अहिले हलहरु खुलपछि हिन्दी अंग्रेजी फिल्मले दर्शकलाइ हलसम्म तानेको छ । दर्शकहरुले फिल्म हल जान बिर्सेका रहेनछन । यसबाट हामी उत्साहित नै छौं । कोरोना पछि दर्शकहरु जुन रुपमा हलसम्म आएका छन्, त्यसले हामीलाई फिल्म निर्माण गर्न उत्साह दिएको छ ।
अंग्रेजी हिन्दि फिल्मको भर पर्नु ठिक हो त ?
मलाइ यो अचम्म लागेको छ । जसले यो भनिराको छ, उसको कन्फिडेन्स कहाँ बाट आइराछ ? अर्वाैको फिल्मसंग लाखौ वा बढीमा २/३ करोडमा बनेको फिल्मले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, यो तितो सत्य हो । हिन्दि अंग्रेजी फिल्मको भर पर्नु बाध्यता हो ।
कोरोनाकाल पछिको फिल्म समयलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
स्थति उत्साहजनक त छैन । तर फिल्मको इतिहास हेर्नु हुन्छ भने संकटपछि फिल्म क्षेत्र झन बलियो भएर, झन राम्रो भएर आएको इतिहास छ । अब फिल्मको उर्वर समय सुरु हुन्छ ।
अलि व्याख्या गर्नुस न ?
भन्न के खोजेको हो भने अब नयाँ न्यारेसन आउँछ । जो घिसिपिटी फिल्म बनाइ राथे उनीहरु हराउँछन । संकट पछि जहिले पनि पुरानो सेलाउने र नयाँ उदाउने गर्छ, फिल्म क्षेत्रमा पनि त्यहि हुन्छ । अब नयाँ डिरेक्टर, नयाँ कथा, नयाँ स्टाइल आउँछ । दर्शकको टेस्ट धेरै नै फेरिसक्यो ।
पुराना फिल्म निर्माताहरुको अवस्था के छ ?
उनीहरु अलि सेलाएको अवस्था छ । लामो समय फिल्म होल्ड गरेर बस्नु पर्यो । उनीहरु पनि अब बिस्तारै फिल्म बजार तातिन थाले संग सुरु हुन थालेका छन ।
भाडाकुँटी फिल्म कहिलेदेखि निर्माणमा जान्छ ?
उक्त फिल्म बनाउने भनेर घोषणा त गरियो । धेरैले हौसला पनि दिनुभयो । तर, त्यसमा पर्याप्त मात्रामा लगानी जुट्न सकेको छैन । लगानी जुट्न साथ छाँयाकनमा जान्छौं । त्यो मैले घोषणा गरेको पहिलो फिल्म हो । यसलाई जसरी पनि सफल बनाउने छु ।
तपाईको अब अन्य तयारी के छ किरण जी ?
म एज अ राइटर डिरेक्टर तयारै छु । दुइ लक डाउनमा मैले दुइ वटा स्क्रिप्टकोप फस्र्ट ड्राफ्ट लेखिसके । बलियो प्रोड्युसर भेटिने बित्तिकै म फिल्म बनाउन लागि हाल्छु । उसो त एक फिल्म घोषणा गरेर पनि प्रयाप्त लगानी नभएका कारण रोकिएको छ । मैले कम बजेटमा काम गर्ने हुनाले लगानी जोगिने निस्चित छ । कमर्सियल एप्रोच हो । म अझै लगानी जुटाइरहेकै छु ।
अब कुन विधाको फिल्म बढी चल्ला ?
उसो त सबै विधाको फिल्म चल्छ राम्रो छ भने । नेपालमा कमै चलेको हर्रर विधामा कठपुतली आएको छ त्यो राम्रो छ । त्यत्तिको फिल्म चल्नु पर्छ । त्यसका अलावा दर्शक भर्खर लामो निरासा भोगेर आएकोले तत्काल कमेडी र लभ ड्रामा हेर्ने उनीहरुको चाहना छ । तत्काल उनीहरु मनोरंजनवाला फिल्म हेर्न चाहन्छन ।
वि.सं.२०७८ पुस २८ बुधवार १४:४२ मा प्रकाशित
News Views: 432
अघिल्लाे मेसिनबाट ट्राफिक जरिवाना तिर्ने व्यवस्था सुरु,कसरी तिर्ने ?
पछिल्लाे दुध उत्पादन बढाउन गाईको टाउकोमा हेडसेट